Saturday October 23, 2021 - 19:45:23
Khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay dagaalkii cuslaa ee maanta ka qarxay magaalada Guriceel ee gobolka Galguduud.
Wararka ka imaanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar rogaal celis ah oo ay galabta soo qaadeen maleeshiyaadka kooxaha Mushrikiinta uu sabab unoqday in ciidamada maamulka Galmudug dib looga qabsado xarumaha maamulka Guriceel.
Khasaara lixaad leh ayaa dhinacyada kasoo kala gaaray dagaalkii galabta dhacay, ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in dagaalka lagu dilay Gaashaanlle Abdiladiif Feyfle oo ahaa Taliyihii Maleeshiyaadka Danab ee gobollada dhexe.
Sarkaalkan oo ciidanka Mareykanka ay ku tababareen saldhigga Balidoogle ayaa isagoo ciidan boqolaal ah wata gurmad ahaan utagay Guriceel, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in labada dhinac ay ku dagaallamayaan magaalada waxaana caawa fiidkii la maqlayay daryanka rasaas iyo madaafiic aad uculus.
Maleeshiyaadka Suufida ayaa gacanta ku dhigay illaa 2 gaari oo ay lahaayeen ciidamada 'Galmudug' lama saadaalin karo sida ay noqon doonto xaaladda Guriceel balse DF-ka ayaa ciidamo dheeraad ah ka dajisay garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb.